शास्त्र अनुसार कुन काम कुन बार गर्दा शुभ र लाभदाइक हुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् – Annapurna Daily
शास्त्र अनुसार कुन काम कुन बार गर्दा शुभ र लाभदाइक हुन्छ ? थाहा पाउनुहोस्
On Jul 24, 2021 414
आईतबार : आइतबार राज्याभिषेक गर्ने , गीत, वाध्य, राज सेवा, गाइ गोरु, किनबेच गर्ने , हवन गर्ने, मन्त्र–उपदेश गर्ने, औषधी निर्माण गर्ने, शास्त्र ,सुन, तामा, उनि, बस्त्र आदि किनबेच गर्ने रातो वस्तुको कारोबार गर्नु धेरै शुभ हुने गर्छ।
सोमबार : यस दिन भगवान शिवको प्रिय मान्ने भएकाले पनि धेरै कार्यहरुको सुरुवात गर्ने गरिन्छ। विशेष गरि गाइ, भैसी, घोडा, फूल, घाँस, वृक्ष्य, मोति, चाँदी आदिको किन बेच गर्नु, महिलाको संगत गर्नु एकदम शुभ हुनेछ।
शुक्रबार : शुक्रबारको दिन गायन ,मणि , रत्न , हिरा , सुग न्ध , बस्त्र , उत्साह , अलंकार , बाणिज्य , व्यापार , गाइ -बस्तु किनबेच गर्नु , द्रव्य भण्डारण गर्नु र संचय गर्नु तथा कृषि कार्य शुभ मानिन्छ ।
शनिबार : यस दिन सुरुवात गरिएका हरेक कार्यमा शनि देव को ठूलो प्रभाव पर्ने गर्छ। शनिबार झुटो बोल्नु , ठगि गर्नु , कपट गर्नु , गृह (प्रवेश), स्थिर कार्य , नोकरी गर्नु , कल कार खानाको उत्घाटन , फलाम , तरवार आदिको कार्य गर्नु निकै शुभ मानिने गर्छ ।